Maitiro ekuisa iyo iPhone kupindura mafoni otomatiki | IPhone nhau
Kunyangwe ichokwadi kuti iOS inozivikanwa nekuve yakapusa sisitimu yekushandisa kushandisa, inotipa huwandu hukuru hwekugadzirisa sarudzo, yatinogona kugadzirisa nezvayo zvakawanda, kunyanya kana tichitaura nezvesarudzo zvekuwanika, chimwe chinhu icho Apple yagara ichizvirova uye ndizvo chaizvo.
Apple inotipa nhamba yakakura yesarudzo dzevanhu vane matambudziko ekufamba, matambudziko ekuona ... sarudzo dzatinogona kuita kuti zuva nezuva mashandiro eApple yedu kana iPad ive nyore kutsungirira. Imwe yesarudzo dzinonyanya kubatsira uye iyoyo Izvo hazvisi chete zvinobatsira kune urwu rudzi rwevanhu, ndiyo sarudzo iyo inotibvumidza kuti tingo pindura mafoni.
Nekuda kwebasa iri, tinogona kumisikidza yedu iPhone kuti ipindure mushure menguva yemasekondi (yakatemerwa kumasekondi makumi matanhatu) yatakatangisa. Iri basa rakanakira patinenge tichigadzira chikafu kumba kana patinenge tichiita rimwe basa risingatibvumidze kushandisa iyo iPhone patinogamuchira kufona, kana tichida kudzivirira kuisvibisa kana iyo inogona kutambura tsaona yemhedzisiro yakakura.
Batidza otomatiki kufona kupindura pa iPhone
Kutanga, tinoenda kune iyo Zvirongwa kubva ku-iOS.
Wobva wadzvanya pa Accessibility.
Mukati mekuwanika tinotsvaga sarudzo Audio redirection.
Iye zvino tinodzvanya Pindura otomatiki, basa rakaremara nekutadza.
Dzvanya pane switch kuti uite iri basa uye pazasi chete tinoisa nguva yadarika kusvikira iyo iPhone yaita hanya nekupindura mafoni atinogamuchira.
Iyi sarudzo, inowanikwawo neiyo iPad, iyo inobvumidza iwe kuti ugamuchire mafoni sekureba sekuti zvese zvishandiso zvakabatanidzwa kune imwechete account, zvakabatana kune imwecheteyo yeWi-Fi network uye iyo Kufona kune mamwe madivayiri sarudzo, iri mukati meFoni basa masetingi, inoitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa iPhone kuti ipindure inofona otomatiki
Zvingave zvakanaka kana vakagonesa iyi sarudzo nemamiriro ekutyaira
Isu tinoongorora iyo Tado Smart Thermostat kudzora kupisa kwako
Iyo HomePod yatove neiyo FCC chisimbiso: kusvika kwayo kuri padyo